राष्ट्रिय झण्डाको किनारामा कालो रङ्ग ! | Aaja ko Shiksha
विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमा गम्भीर त्रुटि
सबैभन्दा त्रुटि त कक्षा ९ का पाठ्यपुस्तकमा भेटिएका छन् । कक्षा ९ को नेपाली विषयको अग्र (कभर) पृष्ठमा नेपाली झण्डाको किनारालाई कालो रङ्गमा देखाइएको छ । यसबाट विद्यार्थी भ्रममा परेका छन् । नेपालको झण्डाको किनारा नीलो हुन्छ । पाठ्यपुस्तकको कभर बहुरङ्गी हुनुपर्ने निर्णय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकै छ । तर, किताब विद्यार्थीको हातमा आइपुग्दा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको किनारा कालो भएर आउँछ । यसको सिआरसी (क्यामेरा रेडी कपी) तयार पार्ने निकाय पनि पाठ्यक्रम विकास केन्द्र नै हो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छापेको यो पाठ्यपुस्तकमा कसरी झण्डाको किनारा कालो भयो भन्ने सन्दर्भमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. लेखनाथ पौडेल भने यो गल्ति नै भएको स्वीकार्नुहुन्छ । ‘मैले केही दिन अघि थाहा पाएर यो के भएको हो भनेर जनक शिक्षाका अधिकारीहरुसँग कुराकानी गरेको थिएँ,’ उहाँले भन्नुभयो । यद्यपि, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै ले–आउट (साज–सज्जा) गर्दा पाठ्यपुस्तकमा यस्तो गरेको हो वा जनक शिक्षाबाटै छपाईमा त्रुटि भएको हो भन्ने सम्बन्धमा छानबीन हुने डा. पौडेलले बताउनुभयो । यता, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेश तिमल्सिना भने यसमा आफूहरुको गल्ति नभएको बताउनुहुन्छ । ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाटै दुई रङ्गमा कभर आएको थियो,’ तिमल्सिनाले आजको शिक्षासित भन्नुभयो, ‘कक्षा ६–९ सम्मकै दुई कलरमा आयो । किताब छपाईको लगभग अन्तिमतिर करिव २५ प्रतिशत मात्र छाप्न बाँकी छँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट चार रङ्गको कभर पठाइयो ।’ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक डा. पौडेलले यो पटक पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा गइसकेकाले अब एउटा सूचना छिट्टै जारी गर्ने बताउनुभयो । विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी भ्रममा नपरुन् भनेर सूचना जारी गरिने उहाँको भनाइ छ ।
कक्षा ९ को अनिवार्य अंग्रेजी किताबमा मूल्य नै राखिएको छैन । बिक्रेताहरुले भने ८० रुपैयाँमा सो पुस्तक बेचेका छन् । यसरी मूल्य नै नराख्नुपर्नाको कारण भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा दुबैले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । किताबको त्रुटि र मूल्यको फरकपनका विषयमा निजीक्षेत्र भने अलमलिनुपरेको प्रतिनिधि दीपक भण्डारी बताउनुहुन्छ । ‘एउटै पाठ्यपुस्तक विभिन्न थरी मूल्यमा बेचिरहेका अवस्थामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समन्वय गर्नु पर्दैनथ्यो त ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।